1 Ndị Eze 19 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ndị Eze nke Mbụ 19:1-21
Ịlaịja gbara ọsọ ndụ ka Jezibel ghara igbu ya (1-8)
Jehova mere ka Ịlaịja hụ ya n’ugwu Horeb (9-14)
Ịlaịja ga-ete Hazel, Jihu, na Ịlaịsha mmanụ (15-18)
A họpụtara Ịlaịsha ka ọ nọchie Ịlaịja (19-21)
19 Ehab+ gara kọọrọ Jezibel+ ihe niile Ịlaịja mere na otú o si jiri mma agha gbuo ndị amụma ahụ niile.+ 2 Jezibel wee zie mmadụ ka o zie Ịlaịja, sị: “Ka chi m taa m ahụhụ, ka ọ tasiekwa m ahụhụ ike,* ma ọ bụrụ na n’ụdị oge a echi emeghị m ka ị dị ka ndị amụma ahụ i gburu!”* 3 Egwu wee tụwa Ịlaịja, ya ebilie gbaa ọsọ ndụ,*+ gbaga Bia-shiba+ dị na Juda.+ Ọ hapụkwara onye na-ejere ya ozi ebe ahụ. 4 O ji otu ụbọchị gaa ije garuo ala ịkpa. Mgbe o ruru, ọ gara nọrọ ọdụ n’okpuru otu osisi a na-akpọ brum. Ọ rịọkwara Chineke ka ọ* nwụọ. Ọ sịrị: “Jehova, biko, o zuola. Mee ka m nwụọ,*+ n’ihi na akaghị m nna nna m hà mma.” 5 Mgbe o kwuchara ihe a, ya edinara ala n’okpuru osisi brum ahụ, ụra eburu ya. Ma, otu mmụọ ozi bịara metụ ya aka,+ sị ya: “Bilie rie nri.”+ 6 Mgbe o lere anya, ọ hụrụ achịcha dị n’elu nkume dị ọkụ na otu nnukwu iko mmiri. E dosara ha n’akụkụ isi ya. Ọ tara achịcha ahụ, ṅụọ mmiri ahụ, dinarakwa. 7 Mmụọ ozi Jehova mechara bịa nke ugboro abụọ metụkwa ya aka, sị: “Bilie rie nri, n’ihi na ebe ị ga-aga dị ezigbo anya.” 8 O biliri rie nri, ṅụọkwa mmiri, nwetazie ume o ji gaa ije ụbọchị iri anọ, ehihie na abalị. Ọ gagidere ruo Horeb, bụ́ ugwu nke ezi Chineke.+ 9 Mgbe o ruru ebe ahụ, ọ banyere n’otu ọgba,+ rahụkwa na ya n’abalị ahụ. Ma, Jehova jụrụ ya, sị: “Ịlaịja, gịnị ka ị na-eme ebe a?” 10 Ya asị: “Eji m ezigbo ịnụ ọkụ n’obi na-efe Jehova bụ́ Chineke nke ụsụụ ndị agha.+ Ma ndị Izrel ahapụla ọgbụgba ndụ gị.+ Ha akụtuola ebe ịchụàjà gị, jirikwa mma agha gbuo ndị amụma gị,+ ya afọzie naanị m. Ugbu a, ha na-achọ igbu m.”*+ 11 Ma Chineke sịrị ya: “Gaa guzoro n’ihu Jehova n’ugwu a.” Jehova nọkwa na-agafe Ịlaịja,+ oké ifufe ana-agbawa ugwu na nnukwu nkume n’ihu Jehova.+ Ma, Jehova anọghị n’ifufe ahụ. Mgbe ifufe ahụ kwụsịrị, ala mara jijiji,+ ma, Jehova anọghị n’ala ọma jijiji ahụ. 12 Mgbe ala ọma jijiji ahụ kwụsịrị, ọkụ gbawara.+ Ma, Jehova anọghị n’ọkụ ahụ. Mgbe ọkụ ahụ nyụrụ, a nụrụ olu onye weturu olu na-ekwu okwu.+ 13 Ozugbo Ịlaịja nụrụ ya, ọ chịịrị uwe e ji mara ya fụchie ihu ya+ gaa guzoro n’ọnụ ọgba ahụ. Ma, otu olu jụrụ ya, sị: “Ịlaịja, gịnị ka ị na-eme ebe a?” 14 Ya asị: “Eji m ezigbo ịnụ ọkụ n’obi na-efe Jehova bụ́ Chineke nke ụsụụ ndị agha. Ma ndị Izrel ahapụla ọgbụgba ndụ gị.+ Ha akụtuola ebe ịchụàjà gị, jirikwa mma agha gbuo ndị amụma gị, ya afọzie naanị m. Ugbu a, ha na-achọ igbu m.”*+ 15 Jehova asị ya: “Gaghachi n’ala ịkpa Damaskọs. Ị garuo, tee Hazel mmanụ+ ka ọ bụrụ eze Siria. 16 Ị ga-agakwa tee Jihu nwa nwa Nimshaị mmanụ+ ka ọ bụrụ eze Izrel, teekwa Ịlaịsha* nwa Shefat, onye Ebel-mehola, mmanụ ka ọ bụrụ onye amụma ga-anọchi gị.+ 17 Onye ọ bụla Hazel na-ejighị mma agha gbuo,+ Jihu ga-egbu ya.+ Onye ọ bụla Jihu na-ejighị mma agha gbuo, Ịlaịsha ga-egbu ya.+ 18 A ka nwere puku mmadụ asaa (7,000) n’Izrel,+ ndị na-egbutụbereghị Bel ikpere n’ala,+ ndị na-esusutụbeghịkwa ya ọnụ.”+ 19 Ịlaịja wee si ebe ahụ pụọ, hụ Ịlaịsha nwa Shefat ka o ji ehi iri abụọ na anọ e jikọrọ abụọ abụọ na-akọ ọrụ. Ha niile nọ ya n’ihu, ma, yanwa nọ na-edu abụọ ndị ikpeazụ. Ịlaịja gakwuuru ya wụkwasị ya uwe e ji mara ya.+ 20 Ịlaịsha wee hapụ ehi ndị ahụ gbakwuru Ịlaịja, sị ya: “Biko, ka m gaa susuo nne m na nna m ọnụ, mụ abịazie sowe gị.” Ya asị ya: “Gawa, egbochighị m gị ịga.” 21 Ọ laghachiziri, kpụrụ ehi abụọ chụọ àjà, jiri osisi e ji jikọta ehi ndị ahụ sie anụ ha, bupụtakwara ya ndị mmadụ, ha erie. Mgbe ha richara, o sooro Ịlaịja, malitekwa ijere ya ozi.+
^ Na Hibru, “Ka chi m mee m otú a, ka ọ tụkwasịkwa ihe na ya.”
^ Ma ọ bụ “ka mkpụrụ obi gị dị ka mkpụrụ obi ndị amụma ahụ i gburu.”
^ Ma ọ bụ “gbaa ọsọ maka mkpụrụ obi ya.”
^ Ma ọ bụ “mkpụrụ obi ya.”
^ Ma ọ bụ “wepụ mkpụrụ obi m.”
^ Ma ọ bụ “iwepụ mkpụrụ obi m.”
^ Ịlaịsha pụtara “Chineke Bụ Nzọpụta.”
1 Ndị Eze 19